ကိုလက်စထရောတက်ခြင်းနှင့် လိင်မှုဘဝ - Page 12 of 27 - Hello Sayarwon
Cholesterol မြင့်မားခြင်းကို hypercholesteremia ဟုခေါ်ပြီး ယင်းမှာ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ သို့သော် သွေးကြောများ ထူလာနိုင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ရှိသော ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ ဖြစ်သော နှလုံးဖောက်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ဖြစ်စေပါသည်။
Cholesterol များပြားခြင်းကို သွေးစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်သာ သိရှိနိုင်ပြီး အများအားဖြင့် မည်သည့်ရောဂါ လက္ခဏာမှ ပြသလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Cholestrol မြင့်မားခြင်းသည် မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပြီး မျိုးဗီဇသည်လည်း အရေးကြီးသော နေရာတွင် ပါဝင်ပါသည်။ မမေ့ရန်မှာ သင့်၏ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု၊ အစားအသောက်ပုံစံနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်တို့သည် သင်၏ Cholestrol အပေါ်များစွာ မှိခိုနေပါသည်။
Cholesterol မြင့်မားခြင်းနှင့် လိင်မှုဘဝ
Cholestrol မြင့်မားခြင်းသည် ပြင်းထန်သော ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဖြစ်စေနိုင်သည့်အပြင် သင်၏ လိင်မှုဘဝကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ သွေးကြောကျဉ်းခြင်းကြောင့် လိင်အင်္ဂါသို့ ရောက်သောသွေးနည်းလာပြီးနောက် လိင်မှုရေးရာကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
လိင်တံ့သို့သွေးရောက်နည်းပါက ထောင်မတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ရှိလာစေပါသည်။ ယင်းသို့ ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်ခြင်းအတွက် သောက်ဆေးများသည် သွေးကြောနံရံများကို ကျယ်စေပြီး သွေးစီးဆင်းမှုကို ကောင်းမွန်စေသော်လည်း နှလုံးသွေးလွှတ်မှုတွင် ပြဿနာဖြစ်စေပါသည်။ သွေးတွင်း Cholestrol မြင့်မားသူတွင် နှလုံးသွေးစီးဆင်းမှု ပြဿနာရှိပြီး လိင်အင်္ဂါတောင့်တင်းမှုကို ပြဿနာဖြစ်စေပါသည်။
ထပ်မံလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ အရမူ Cholestrol မြင့်မားခြင်းသည် အမျိုးသမီးများတွင်လည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာဖြစ်စေပါသည်။ သွေးတွင်း Cholestrol များသော အမျိုးသမီးများတွင် လိင်ဆက်ဆံစဉ် သဘာဝအလျောက် ထွက်သောအရည်သည် ချော့မွေ့မှု နည်းလာသောကြောင့် နာကျင်မှု့ ဖြစ်လာပြီး လိင်ဆက်ဆံရန် ကြောက်ရွံ့ပြီး လိင်စိတ်နည်းပါးစေပါသည်။
သွေးတွင်း Cholesterol မြင့်မားခြင်းနှင့် လိင်တံမတောင့်တင်းနိုင်ခြင်း
သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ တွေ့ရှိချက်အရ သွေးတွင်း Cholestrol မြင့်မားခြင်းသည် လိင်တံတောင့်တင်းခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုရှိပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာ သွေးတိုးရောဂါရှိသော အမျိုးသားများတွင်လည်း အလားတူ ပြဿနာရှိနိုင်ပါသည်။ သွေးတွင်း Cholestrol များသောသူတွင် မကောင်းသော Cholestrol ဖြစ်သော LDL Cholestrol တက်လာပြီး သွေးကြောတွင် အနယ်အနှစ်များ ဖြစ်လာပြီး သွေးကြောများကို ကျဉ်းစေပါသည်။ ထိုအခါတွင် သွေးစီးဆင်းမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပါမည်။ အများစုမှာ နှလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးသော သွေးကြောများအတွက်သာ စိတ်ပူကြသော်လည်း လိင်တံဆီသွားသော သွေးကြောများတွင်လည်း ပြဿနာဖြစ်လာပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာရှိသောသူတိုင်း ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးသင့်ပြီး အကယ်၍ ဆရာဝန်မှ သွေးတွင်း Cholestrol မြင့်မားမှုကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါက သင်၏ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲရပါမည်။ ဥပမာ။ အဆီများသော အစားအစာများကို ရှောင်ကြည်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခြင်း စသည်တို့ပြုလုပ်ရပါမည်။ ထို့အပြင် လိုအပ်သော ဆေးဝါးများကိုလည်း လိုအပ်သလို သောက်သုံးရပါမည်။
Is High Cholesterol Harming Your Sex Life? http://www.foxnews.com/story/2008/08/13/is-high-cholesterol-harming-your-sex-lif-1889509206.html. Accessed August 14, 2017
High Cholesterol in Men. http://www.webmd.com/men/guide/high-cholesterol#1. Accessed August 14, 2017
Erectile Dysfunction and Cholesterol:7Facts Your Need to Know. https://www.accessrx.com/blog/erectile-dysfunction/erectile-dysfunction-and-cholesterol-7-facts-your-need-to-know-m0929/#. Accessed August 14, 2017